Ogaden News Agency (ONA) – Xuskii qawmiyaduhu maxaa kaaga soo baxay? Diiftii Xuska oo Jigjiga aanay weli ka bogsoon – Noora Afgaab
Xuskii qawmiyaduhu maxaa kaaga soo baxay? Diiftii Xuska oo Jigjiga aanay weli ka bogsoon – Noora Afgaab
Intii uu socday xuska waxaa hubaal ah inaad arkayseen dadaal aad u badan oy ku jirieen Cabdi ilay iyo kooxdiisu taasoo aad ka maqlaysay in badan TV yada kilalku adeegsado in lagu celcelinayay diyaar garawga si fiican ayuu u socdaa, waxaana hubaal ah akhristaw in aad ogtahay erayo badana aad maqlaysay ama akhriday kuwaaso ku saabsanaa diyaar garawga xuskan.
Xuskan qabashadiisa waxaa Iska lahaa xafiiska federshinka heer fedral kasoo bixinaya dhaman waxii kharash ku baxa xuskaas. Sanadkii hore oo ahaa Kii 7aad waxaa lagu qabtay deegaanka Axmaarada, waxaana ku baxay lacag Dhan 120 Milyan oo birr oo kaliya oo 90 Milyan ay bixiyeen xafiiska federashinku.
Hadaba deegaanka Somalidu maxaa GAAR ku ah oo sidan oo dhan loogu baabiyeeyay dhaqalihi deegaanka? Shacabkii deegaanka maxuu galabsaday oo loo xidh xidhay? Maxaa kalsooni ah oo dheeri ah uu ku helayaa Cabdi Ilay? Maxuu islaha Waad ku heleysaa?
Su aalahas kor ku xusan waxaa jeclahay inaan is-waydiino idinkagana jawaabo intii karaankayga ah.
Cabdi ilay waxaa uu isticmaalay misaaniyadii sanadka 2013/14 oo dhanayd 4 bilyan in ka badan inuu xafladaas ku qabto, waxaa uu iloobay inuu shacabka deegaanku sugayay in horumar loogu sameeyaa lacagtas. Waxaa dheeraa taa, dhaqaalaha sida sharci darada uu ku rurrursnayay, haday ahaato mida Yasiin dheere uu ururinayay iyo haday ahaato midii ganacsata uu xooga kaga qaadayay.
Cabdi ilay waxaa uu xidh xidhay inkabadan 2000 o qof oo aan waxba galabsan. Dadkaas waxa uu u xidh xidhay laba arimood midkood ama labdaba. 1aad – inuu federaalka u gudbiyo message (fariin) ah inuu ilaalainayo Nabad galyada deegaanka iyo 2aad – inuu ninkuu necbaa iyo reerkuu la dagaalansanaaba ki kiiso.
Cabdi ilay waxaa uu lacagtaas faraha badan een soo sheegnay ku fuliyay si sharci daro ah taason lahayn wax raadraac ah oo qandraas (BID) loo smaeeyay uuna jirin ee dadka jeebadaha loogu shubay. Waxaana dadkaas u badnaa saraakiisha Tigreega ah iyo ehelada uu ka dhashay.
Waxaa kadaran oo ah wax aad looga murugooda magaalda biyaha laantu haysatay oo hadana meelaha qaar oo hal CEEL u shaqaynayay loogu leexiyay biyihii ceelkaa sidii caws looga soo Saari lahaa garoonka hawshan lagu qabanayay. Waxaa taa igala sii yaab badnaa lacagta uu laaluushka ku bixinayay suu u dhamaystiro qabashada xuskan sida lacag uu Kasa Teklemariam siiyay isagoo ugu iibiyay 10 Milyan dhul Adis Ababa xaafadda Bole Medhaalem kuyaala.
Waxaan ka murugoodaa hadaladii ay lahayeen wariyayaasha afka xabashiga ku hadlayay ee ahaa ‘Etoobiyanta la maragaagad “oo macneheedu yahay Itoobiyaanimada shacbka la xaqiijiyo – Tasoo ka dhigan in hada Nala barayo in aan nahay Itobiya.
Hadaba akhristaw waxaas oo dhan oo aan ka soo sheekaynay waxa ay u dheceen in Cabdi iley la dhaho GOSH sifiican Ayad yeeshay Lakiin shacabka ma ilaawayo waxa ku dhacay maalintaa.
labadan Hawaarinta ayaa 5shantii waqtiga jigjiga iyagoo xaafada baadhanaya ay dad kusoo baxeen kadibna iyagoo sii laxaad sanaya oo xafadii kasii baxaya uu sawirka ONA qabtay
Bal hadda aan diirada saarno raadkii xuskaasi katagay, waxa ka sii hadhsan iyo sida looga soo kabanayo. Dhinaca isu socodka waxaa laqaaday dhagaxaantii iyo waxyaabihii wadooyinka lahu kala gooyey. Intii ugu danbeeysay maalintii shalay ayaa la qaaday, laakiin wali xaga isusocodka ayuu dhibkii kasii jiraa waxaan ilaa hada wadooyinkii muhiimka ahaa loo fasixin gaadiidka loo yaqaano bajajka oo ah midka ay dadka badankiisu ku tiirsan yihiin sidoo kale wali baadhitaankii ayaa socda inkasta oo uuna wadooyinka muhiimka ah maalintii ka soconin oo uu iyaga ka bilaabmo wixii 5ta galabnimo loo gaadho. Wuxuu baadhitaanku isugu biyo shubtay maalin iyo habeenba oo uu culeeysku saaran yahay meelaha suuqa kabaxsan ee koonayasha ah sida wadooyinka yar yar iyo xaafadaha magaalada gaar ahaan xafadaha 01, 08, 06 iyo xaafada sheikh Nuur Ciise. Hadaba waxaad mooda inay maleeshiyadka xaafadahu iyo kooxo liyuu boolis ihi ay qaab nololeed kadhigteen badhitaankan oy adagtahay in la joojiyo inkasta oonan wali si rasmi ah loogu sheegin. Sidoo kale liyuu booliska ayaa hada qaabka baadhitaanka hidhaar kadib waxaay ubadaleen si casri ah oo ay gaadiidka iyo dadka wadooyinka socda ay ku shaxaadaan taasoo ah inta ay joojiyaan inay shaxaad weydiistaan. ​​Habeenkii iyada marhadii uu gabalku dhaco waxaad arkeysaa guryo labaadhayo kadibna la guranayo. Waxaa iyana sii badaneysa oo jira dad inteey dharka liyuu booliska soo xidhaan wax badhanaya habeenkii Markii la gaadho. Waad maado ay Hidhaartii katagtay oo xirfad ah sida dadka loo baadho.
Dhinaca kali shaqaalihii dawlada ayaa isla shalay waxaa loo sheegay inay joojiyaan badhitaanka oo aay shaqadoodii dib ugu noqdaan. Shaqaalaha ayaa waxaay bilaabeen inay isweeydiiyeen goobta ama meesha uu tegay ee aay ka helayaan xafiiskoodii ama ay u raadcaaynayaan maadama oy badankooda shaqada ugu danbeeysay iyadoo xafiiskooda oo kujiro ama ah kililka gudihiisa. Xafiisyada badankooda ayaan iyaguna wali shaqooyinkii bilaabin maadama oo aayna meeshoodii kunoqonin meelkale oy ku shaqeynkarana ayna ilaa hada qaarkood degin ama helin.
Sidoo kale dhaqdhaqaaqii iyo xarakaadkii ganacsiga ayaan wali soo noqonin waxaa meel ay kaga hagaagaan ama kabilaaban garan la’ dadkii xoogsatada ahaa intoodii aan soo bixin mudadii uu diyaargarawga xusku socday oo aqoonsi la aan awgeed aan uso bixin, kuwaas ood moodo dad intay dhinteen soo noolaaday oo laqabsanle aduunka. Hadaba guud Ahaan waxaad mooda inay shacabka iyo shaqaalaha dawladuba u baahan yihiin wakhti dheer oy dib ugu soo kabtaan siday shaqooyinkodi caadiga ahaa u bilaabaan.
Dhinaca masuuliyiinta xafiisyadoodii huteelada laga dhigay ayaa filayey in loo fasaxo ama loo sheego inay xafiisyadii ku noqdaan say shaqooyinkoodi u bilaabaan waxaayna qaarkood kashakisan yihiin inay goobtaasi isu badasho huteelo caalami ah oo martida dawlada federalka lagu soo dhaweeyo, inkasta oy hada sariirihii uun yaalan oy martidii kililadu qaateen bustayaashii iyo furaashtii kadib markuu Cabdi Iley u idmay ama fasaxay inay qaataan isagoo u arka inay amaan u tahay arintaasi waxaa kale oo layaab noqotay intii ayna martidaasi tagin waxaa magaaladan jigjiga lasoo galiyey oo fasax dawli ah kusoo galay 15toban baabuur oy Niman Tigree ah leeyihiin oo wada qalabka elektronisk oy mobile-ada kamid yihiin. Baabuurtan oo sitoos ah uga soo galay Wajaale ayaa waxaa dhamaan wixii saarnaa kala wareegay Cabdi Iley oo u qeeybiyey martidii kililadaas ka socday badankooda, halka qaarkoodna qiimo jaban lagaga gadayey qalabkaas. Arintan oo keentay inuu hoos u dhaco wixii laga iibsan lahaa meheradaha magaalada jigjiga iyo degaanka.